Alatsinainy 26B (Lc 9, 46-50) 01/10/2018 | FKMP
Alatsinainy 26B (Lc 9, 46-50) 01/10/2018
« Ary nisy hevitra tonga tao an-tsain’ireo, dia ny amin’izay lehibe aminy. Fantatr’i Jesoa ny hevitra tao am-pony, ka naka zaza kely anankiray izy napetrany teo anilany,
dia hoy izy tamin’izy ireo: Na iza na iza mandray itony zazakely itony amin’ny anarako dia mandray ahy, ary na zovy na zovy mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy; fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra dia izy no lehibe. Dia niteny Joany nanao hoe: Ry Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin’ny anaranao izahay, ka noraranay, satria tsy namantsika izy; fa hoy Jesoa taminy: Aza raràna, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. »
Fihetsika matetika ataontsika olombelona ny ataon’ny mpianan’i Jesoa eto : mifampitaha amin’ny hafa amin’ny zavatra rehetra, mijery hoe iza no tsara kokoa, iza no lehibe kokoa. Miteraka fialonana izany faniriana te ho ambony nohon’ny hafa izany, faniriana te ho deraina. Miteraka halahelo sy hakiviana ihany koa satria matahotra sao ratsy nohon’ny hafa, sao voaavaka sy voatsikeran’ny olona.
Mampianatra antsika i Jesoa fa ny toetra tsara indrindra raha te ho voalohany dia ny fanompoana amin’ny fo feno fitiavana, fanetren-tena sy fandeferana, ka tsy miandry valiny. Izany ihany koa ny lohahevitry ny Fiangonana amin’ity taona pastôraly vaovao ity : » Ny asa fanompoana no andraisana andraikitra ».
Jesoa Tompo ô, miaraka amin’ny olontsambatra Lucien Botovasoa izahay no mivavaka Aminao, ampio izahay hanara-dia Anao amin’ny lalan’ny Fitiavana sy ny fanompoana.
Previous Post: Taona pastoraly vaovao, aomonie vaovao
Next Post: Talata 26B (Mt 18,1-5.10) 02/10/2018